Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. सांसदलाई तालिम दिन युएनडिपीको ६४ करोड – Emountain TV
काठमाडौं, ३१ जेठ । संसद्मा दाताको प्रभाव निरुत्साहित गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेका वेला संसद् सचिवालयले सांसदहरूको सशक्तीकरणका लागि भन्दै संयुक्त राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) बाट झन्डै ६४ करोड रुपैयाँ सहयोग लिने सम्झौता गरेको छ ।
संसद् सचिवालयका महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराई र युएनडिपीका प्रतिनिधि रेनउड मेएरबीच ५९ लाख १५ हजार २ सय ५७ अमेरिकी डलर (६३ करोड ८८ लाख ४७ हजार नेपाली रुपैयाँ) सहयोगको सम्झौता भएको हो । १० वैशाखमा भएको उक्त सम्झौताबारे अधिकांश सांसद मात्रै होइन, राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनासमेत अनविज्ञ छन् । ‘हामी (सभामुख र अध्यक्ष) आइसकेपछि युएनडिपीसँग सम्झौता भएको छैन । तपाईंले भनेर थाहा भयो । म भोलि बुझ्नेछु,’ उनले नयाँ पत्रिकासँग भने ।
संसद्मा कुरा उठ्दा कर्मचारी रातोपिरो
दुईदिने प्रशिक्षणमा केही सांसदले दातृनिकायको पैसाले तालिम आयोजना भएको भन्दै बहिष्कार गरेका थिए । तर, सभामुख र अध्यक्षले ढाकछोप गरेपछि युएनडिपीले नयाँ बानेश्वरस्थित ‘अल्फा हाउस’बाट सांसदहरूका लागि सम्पूर्ण खानपिनको व्यवस्थासहित दुईदिने तालिम भएको थियो । सचिवालयका कर्मचारीको गलत सन्देशका कारण सभामुख र अध्यक्षले समेत आफ्नै खर्चले तालिम भएको भनेपछि युएनडिपीकै कर्मचारी चकित परेको युएनडिपीका एक अधिकारीले बताए ।
सांसदलाई तालिम दिन युएनडिपीको सहयोग लिएको विषय सार्वजनिक भएदेखि नै सचिवालयका उच्च अधिकारी सञ्चारमाध्यमबाट टाढा हुने गरेका छन् । संसद्मा सांसदहरूले दातृनिकायको सहयोगको विषय उठाएलगत्तै उनीहरूको अनुहार रातो हुने गरेको सचिवालयकै एक अधिकारीले बताए ।
विभिन्न सरकारी तथा गैरसरकारी संस्था एनजिओ/आइएनजिओको प्रभावमा संसद् सचिवालयले विगतदेखि नै सांसदहरूलाई तालिमको नाममा मुलुकदेखि मुलुकबाहिरसम्म लैजाने गरेको छ । मुलुकको ऐन निर्माण गर्ने सर्वोच्च निकाय संसद्मा समेत एनजिओ आइएनजिओको प्रभाव बढेकोमा आलोचना भइरहेका वेला संसद् सचिवालयले यस्ता संघसंस्थासँग हिमचिम बढाउने क्रम रोकेको छैन ।
अध्यक्षलाई समेत थाहा छैन
१० वैशाखमा संसद्का महासचिव मनोहरप्रसाद भट्टराईले युएनडिपीबाट झन्डै ६४ करोड रुपैयाँ सहयोग लिने गरी गरेको सम्झौताबारे राष्ट्रिय सभाका अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमल्सिनालाई थाहै छैन । संघीय संसद्मा प्रतिनिधिसभाका सभामुख र राष्ट्रिय सभाका अध्यक्षको वरीयता एउटै हो ।
तर, यसबारे सभामुख र अध्यक्षलाई समेत थाहा नदिई सचिवालयले सहमति गरेको खुल्न आएको छ । अध्यक्ष तिमल्सिनाले भने, ‘हामी सभामुख र अध्यक्ष आइसकेपछि युएनडिपीसँग सम्झौता भएको छैन । तपाईंले भनेर थाहा भयो । म भोलि बुझ्नेछु ।’ दातृनिकायको सहयोग लिँदै नलिने भन्न नमिल्ने भन्दै अध्यक्ष तिमल्सिनाले एउटा मापदण्ड बनाएर अघि बढ्ने बताए । उनले भने, ‘कस्तो सहयोग लिने र कस्तो नलिने भन्नेबारे हामी एउटा निष्कर्षमा पुग्छौँ ।’
‘संसदमा कुरा उठाउछौँ’ झपट रावल, सा्रसद, नेकपा
संसद्जस्तो गरिमामय ठाउँमा, नीति निर्माण गर्ने थलोमा दातृनिकाय प्रवेश गर्नु नै विडम्बना हो । हिजो मुलुकले द्वन्द्वपछिको व्यवस्थामा दातृनिकायको सहयोग लिए पनि अहिले नीति निर्माणको तहमा एउटा तालिम सञ्चालन गर्नसमेत अरूकै मुख ताक्नु अशोभनीय छ । संयुक्त राष्ट्रसंघको बडापत्रमै सानो वा ठूलो जुनसुकै देशको सार्वभौमिकता बराबरी हुने उल्लेख छ । हामी खबरदारी गरिरहनेछौँ । यसबारे मैले विगतमा पनि कुरा उठाइसकेँ । फेरि संसद्मा कुरा उठाउँछु ।
देवप्रसाद तिमल्सिना, सांसद, कांग्रेस
हामीले गत हप्ता संसद् सचिवालयले दिएको प्रशिक्षण नै बहिष्कार गर्न खोजेका थियौँ । तर, सभामुख र अध्यक्षले आफ्नै खर्चमा तालिम भएको बताएपछि रोकियौँ । अब हामी फेरि कुरा उठाउँछौँ । विगतदेखि के–कस्तो सहयोग भएको रहेछ, यसबारे हामी कुरा उठाउँछौँ । सांसदको नाम देखाएर दाताबाट पैसा लिनेको घोर विरोध गर्छौँ ।
१० वैशाख अर्थात् २३ अप्रिल ०१८ देखि लागू हुने गरी ०२२ डिसेम्बरसम्म झन्डै ६४ करोड रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी सचिवालयले सहमतिपत्रमा हस्ताक्षर गरेको छ । स्रोतका अनुसार सचिवालय र युएनडिपीबीच भएको सहमतिको प्रोजेक्ट कोड नम्बर ०००४९६३५ हो । सन् २००८ देखि हालसम्म १० वर्षमा युएनडिपीले नेपालको संसद्लाई सहयोगको नाममा २ अर्ब रुपैयाँ खर्च गरिसकेको स्रोतले जनायो ।
सरकारले नै मागेको हो युएनडिपी
युएनडिपीको नेपाल कार्यालयका सूचना अधिकारी कमल सिग्देलले १० वर्षदेखि नै सरकारको आवश्यकताअनुसार सहयोग गरेको बताए । ‘सरकारको डिमान्डअनुसार हामीले सहयोग गरिरहेका छौँ । संसद्लाई सहयोग गर्नेबारे पनि अर्थ मन्त्रालयको स्वीकृतिपछि सचिवालयसँग सम्झौता गरेको हो । हाम्रो इच्छाअनुसार हुने होइन । नेपाल सरकारले चाहेर मात्रै सम्झौता हुँदै आएको हो,’ उनले भने ।
सरकारको स्वीकृतिपछि सम्झौता भएको हो संसद् सचिवालय
युएनडिपीसँग भएको सम्झौता सरकारको स्वीकृतिपछि मात्रै भएको संसद् सचिवालयले जनाएको छ । सचिवालयका प्रवक्ता डा.भरतराज गौतमले अर्थ मन्त्रालयको वैदेशिक महाशाखाले स्वीकृति दिएपछि मात्रै सहयोग सम्झौता भएको बताए ।
‘युएनडिपीलगायत दातृ निकायले विगतदेखि नै संसद्लाई सहयोग गर्दै आएका छन् । यसमा उहाँहरूको पैसा कसैको खातामा ल्याएर झिक्ने र खर्च गर्ने हुँदैन । प्रक्रियाबाट चल्छ,’ उनले भने ।
पूर्वसभामुखदेखि उच्चपदस्थ पदाधिकारी मौन
संविधानअनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकार गठन भइसकेको अवस्थामा समेत एनजिओ तथा आइएनजिओबाट संसद् सञ्चालनका लागि विभिन्न शीर्षकमा अनुदान लिनु गलत रहेको टिप्पणी हुने गरेको छ । सचिवालयका महासचिवले सांसदहरूलाई थाहै नदिई दातृ निकायको सहयोग लिने सम्झौता गरेको भन्दै सांसदहरू रुष्ट छन् । तैपनि, पूर्वसभामुखदेखि उच्चपदस्थ अधिकारीहरू यसबारे बोल्न चाहँदैनन् । एक पूर्वसभामुखले संसद्मा दातृनिकायको सहयोगबारे आफू केही नबोल्ने भन्दै पन्छिए ।
उनले भने, ‘संसद्, सभामुखजस्तो संस्थाबारे टिप्पणी गर्न चाहन्नँ । संसद्को बजेट सरकारले नै दिन्छ । सरकारकै बजेटले संसद् चलिरहेकै छ ।’
युएनडिपीसँग भएको सहयोग सम्झौताबारे आफूहरूलाई कुनै जानकारी नभएको भन्दै सांसदहरू आक्रोशित भएका छन् । सांसदका लागि तालिम तथा घुमफिर शीर्षकमा सहयोग लिने सहमति भए पनि आफूहरू अनविज्ञ रहेको सांसदहरूले बताएका छन् । तर, संसद् सचिवालयका एक उच्च अधिकारीले प्रत्येक सांसदहरूलाई जानकारी गराइरहनुनपर्ने भन्दै थप कुरा बताउन चाहेनन् ।
०६४ को पहिलो संविधानसभादेखि नै युएनडिपीलगायत दातृनिकायले नेपालको संसद्मा आर्थिक सहयोगका नाममा आफ्नो प्रभुत्व जमाइरहेको संसद् सचिवालयका एक कर्मचारीले बताए । संसद् सचिवालयले सांसदहरूको नाममा विगतदेखि नै दाताहरूबाट यस्ता सहयोग लिने गरेका छन् । सरकारबाट प्राप्त बजेटले मात्रै नपुग्ने भन्दै सचिवालयले दाताहरूबाट पनि सहयोग लिने गरेको छ । आजको नयाँ पत्रिकामा खवर छापिएको छ ।